Ndị GPS Trackers for Kids & Child with Autism - Ngwọta OMG
Ụmụaka Autism na mkpa ndị ọzọ pụrụ iche nwere ike bụrụ ndị na-abụghị ọnụ ma nwee ike ịnwe mmekọrịta gị na ndị mmadụ. OMG GPS Tracker bụ ihe nlere anya emere maka autism nne na nna. Mgbe nwatakịrị nwere Autism na-awagharị, nne ma ọ bụ nna nwere ike ile anya ọnọdụ ya na Ngwa ebudatara na Smartphone. Enweghị mkpa ịmalite ịkpọ ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị agbata obi na-anwa ịchọta nwa efu efu.
Elekere nwekwara ike ịnata ozi olu, nke pụtara na ndị nne na nna nwere ike idekọ ozi olu ma jiri nwayọ jụọ nwata autistic ilaghachi n’ụlọ.
GPS037D - GPS Pụrụ Iche Agụụ Pendant maka ụmụaka Autism / Autism / ụmụaka nwere mkpa pụrụ iche
GPS043D - GPS Tracker Pendant maka Autism Autistic /mụaka / Mkpa Ndị Pụrụ Iche Nwa
GPS032W - OMG Waterproof 4G GPS Tracker Kids Watch ekwentị
GPS008W - OMG GPS Tracker Watch maka ụmụaka
Nzuzo 3734 1 Echiche Taa